EX - ABSDF: မကဒတ စတင်မွေးဖွါးပေးလိုက်တဲ့နေ့ကို သဘောတရားအရ လက်ခံကြဘို့လိုတယ်
မကဒတ စတင်မွေးဖွါးပေးလိုက်တဲ့နေ့ကို သဘောတရားအရ လက်ခံကြဘို့လိုတယ်
November 3, 2013 at 3:49pm
လူတစ်ယောက်မွေးဖွါးလာပြီဆိုတာနဲ့ မိဘတွေက ယောကျာ်းလေးဆိုရင် သားသား မိန်းကလေးဆိုရင် မီးမီးလို့ခေါ်ဝေါ်တတ်ကြပြီး လူလောကထဲရောက်လာတဲ့ မိမိတို့ သားသမီးတွေကိုနှုတ်ခွန်း ဆက်ကြတာဓမ္မာတာပါ၊ ပြီးတော့အများသူငါခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ အမည်လှလှလေးတွေကိုပေးပြီး နာမည်ပေး ကင်ပွန်းတပ်ပွဲလုပ်ကြတယ်၊ နောက်ရက်တွေများမှာ သန်းကောင်စာရင်းရုံးကိုသွားပြီး Register လုပ်ကြ တာတွေကသဘာဝတရားပါ၊
သိပ်မကင်းလှပါ၊ ကော့မူးရာ(၀မ်းခ)စခန်းမှာ ၁၉၈ခု နိုဝင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့ကနေ(၅)ရက်နေ့
သေ့ဘောဘိုးစခန်းမှာ All Burma Students' Democratic Front ကို စခန်းကော်မီတီ
အနေနဲ့ အောက်တိုဘာကတည်းက စတင်သုံးစွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီနာမယ်လေးကို
သီပေါဘိုးဈေးထဲက ယာယီရုံးခန်းလေးထဲမှာပဲ စခန်းကော်မီတီကစတင်ဖေါ်ဆောင်ခဲ့တာကို
သေ့ဘောဘိုးစခန်းရောက် မကဒတ ရဲဘော်ရဲမေတွေအားလုံးမှတ်မိကြဦးမှာပါ၊
ကေအင်ယူကကျောင်းသားရေးရာတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးစိုးစိုးရဲ့အကူအညီနဲ့ မကဒတရဲ့
ပထမဦးဆုံးလုပ်မဲ့ညီလာခံအတွက် ကရင်နီ၊မွန်ဒေသဘက်က ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါ
ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ကော့မူးရာစခန်းမှာလုပ်မဲ့ညီလာခံကိုမသွားမှီ ကေအင်ယူက
ဗိုလ်ချုပ်တာမလာဘောက ကမကထလုပ်ပြီး ကရင်ဒေသရောက်ကော်မီတီကိုဖွဲ့ဖို့အကြံ
ပေးခဲ့လို့ လုပ်ခဲ့ကြသေးတယ်၊ တစ်ချို့က မကဒတဟာတပ်ပေါင်းစုမဟုတ်ဘူး
နယ်မြေကော်မီတီကိုဖွဲ့ဖို့ ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း အိမ်ရှင်ရဲ့ဖြစ်စေလိုတဲ့
ဆန္ဒကိုမငြင်းနိုင်ခဲ့လို့ ကရင်ဒေသရောက်ကော်မီတီကိုဖွဲ့ပြီး ကိုတင်စိုး(စောထ)
ကို တာဝန်ခံလုပ်စေခဲ့တာ သိသူအလွန်နည်းပါလိမ့်မယ်၊ နောက်ဗဟိုဖွဲ့စည်းပြီးမှ
ညီလာခံကိုမသွားခင် ကရင်ဒေသရောက်ကော်မီတွေအနေနဲ့ တစ်စုတစ်စည်းထဲ
သွားစေချင်တဲ့ ကေအင်ယူရဲ့တွန်းအားပေးမှုအရ မြန်မာ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ
ပြီး နောက်ဆုံးမှာမှ သဘောတူညီချက်ရခဲ့ကြတာပါ၊ ဒါကြောင့် ဒီအမည်လေးကိုပဲ
ကျနော်တို့ ညီလာခံကိုသယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ညီလာခံရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့မှပဲ တညီတညွတ်ထဲ
လက်ခံခဲ့ကြတာပါ၊ ပြောရမယ်ဆိုရင် စတင်မွေးဖွါးခဲ့ပြီလိုဆိုရမယ်၊ ပြီးတော့မှ မပြည့်စုံသေးတဲ့
ထပ်မံဖြည့်စွက်တဲ့ဘောပါ၊ အတောင်အလက်မပြည့်စုံသေးတဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ခွပ်ဒေါင်း
နိုဝင်ဘာလ(၅)နေ့မှာ မကဒတဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းနဲ့ ဗဟိုကော်မီတီကိုဖွဲ့စည်းပြီကြောင်း
ကြေငြာချက်ထွက်လာပါတယ်၊ ဒီကြေငြာချက်ဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော်ဟာ
လိုက်တဲ့သဘောပဲ၊ တကယ်ဖြစ်စဉ်သဘောတရားအရဆိုရင် နိုဝင်ဘာလ(၁)မှာ
မကဒတဟာ စခန်းအားလုံးကိုယ်စား စတင်မွေးဖွါးပေးလိုက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်တယ်၊
နိုဝင်ဘာလ(၅)နေ့မှာ မကဒတဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်း ကြေငြာချက်ဟာ ပေးထားတဲ့တပ်ဦး
အမည်နာမနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံလမ်းစဉ်တွေကို လူသိရှင်ကြားကြေငြာချက်ထုတ်တဲ့သဘောမျှသာ
ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ စာရွက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကြေငြာချက်ထက် အမှန်ကတယ်စတင်မွေးဖွါးရာ
(၁)ရက်နေ့ရက်ကိုပဲ အားလုံးကလက်ခံခဲ့ကြလို့ ၁၉၈၉ကစလို့ ကျောင်းသားတပ်မတော်မွေးနေ့
တွေကိုစခန်းအသီးသီးမှာ ကျင်းပခဲ့တာပါ၊ ဒီအပြောင်းအလဲကို တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်
ကာလက ဗဟိုကော်မီတီတွေအသီးသီးအနေ့နဲ့ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ မူလ ပထမဦးဆုံး
ကြေငြာချက်ဟာ ကြေငြာချက်အဖြစ်သာကျန်ခဲ့ပြီး နိုဝင်ဘာလ(၁)ရက်ကိုစခန်းအားလုံးက
လက်ခံကျင်းပခဲ့တာကလည်း စတင်မွေးဖွါးပေးလိုက်တဲ့နေ့ကို သဘောတရားအရ လက်ခံ
စွတ်စွဲဘို့မသင့်တော်ပါဘူး၊ အယူအရလက်ခံရင်သင့်ရင်တော့ အရင်ကလွဲနေတယ်လို့
ဒါကြောင့် မြန်မာ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး(မကဒတ)
ပထမဦးစွာပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးအနေနဲ့ နိုဝင်ဘာလ(၁)ကို လက်ခံခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်၊
You, Myint Aung, Yel Lin Htun, Lwin Lwin and 19 others like this.
Thet Win တစ်ခါတစ်ခါတော့ အဖြစ်မှန်တွေအပေါ်မှာ သူမှန် ငါမှန်ငြင်းဆန်ရင်း သိုက်သိုက်မြိုက်မြိုက်ဖြစ်လာတယ်၊ မသိသေးတဲ့ အချက်တွေသိခွင့်ရတယ်။ အေဘီမှာရယ်စရာစကားကြားဖူးတယ်၊အများညီလျှင်ဤသည်ကျွဲဖြစ်၏တဲ့၊
KoKo Oo သေ့ဘောဘိုးစခန်းမှာ All Burma Students' Democratic Front ကို စခန်းကော်မီတီ
ြ်မန်မာနိင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားပြည်သူဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးနှင့်မြန်မာနိင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးပေါ့။မြန်မာနိင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကပိုပြီးတိုက်ပွဲပုံသဏ္တန်ကောင်းပုံကိုရှေ့နေကျောင်းဆင်းကိုလှအောင်ကဆွေးနွေးပြတာကိုတက်ရောက် လာကြတဲ့အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံကကိုယ်စားလှယ်တွေကဝိုင်းထောက်ခံပြီးအ တည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုံးကကျနော်လဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကိုလှအောင် အိမ်ကြီးမှာနေယင်းတက်ရောက်နားထောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။လူတွေအားလုံးနီးပါးအခုထိမှတ်မိနေပါသေးတယ်။ဆလိုင်းအချိန်ရယင်နံမည်တွေပါရေးတင်ပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
KoKo Oo နံမည်ကတော့သေ့ဘော်ဘိုးကရဲဘော်တွေပေးခဲ့တဲ့သမိုင်းပါ။ ဘယ်နေ့ လုပ်လုပ်၊လုပ်တဲ့သူတွေကိုလေးစားပါတယ်။မသေမချင်းလုပ်ရမှာပဲ။
Phome Maung ဒါပေမဲ့ နိုဝင်ဘာ(၁)နေ့မှာ ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးမှသဘောတူညီစွာ ဖွဲ့စည်းလိုက်သောတပ်ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး
Johnny Lynn ကျနော်အထင်တော့ ကိုထွန်းအောင်တင်ပြထားတဲ့ စတိတ်မင်းဟာ ညီလာခံကချမှတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျော်လွန်လို့မရပါဘူး၊ ညီလာခံဟာ အမြင့်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့နေရာသာဖြစ်တယ်၊ စတိတ်မင်းဆိုတာ ဗဟိုကော်မီတီကဘဲထုတ်ထုတ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီကဘဲထုတ်ထုတ် ညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ထက်နိမ့်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ ကေအင်ယူမှာလည်းအလားတူအယူအဆရှိပါတယ်၊ တခါတလေ ဗဟိုအလုပ်အမှုကော်မီတီကျော်လွန်ပြီးလုပ်ခဲ့တာတွေရှိလျှင် ညီလာခံကျရင်ပျက်သွားတာကြီးပဲ
Ko Oo ကိုထွန်းအောင်ကျော်တင်ထားတဲ့ မကဒတ statement ဟာ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီကထုတ်ထားတာပါ၊ ဗဟိုကော်မီတီအနေနဲ့မဟုတ်ဘူး၊ အမှန်ကဗဟိုကော်မီတီအနေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်၊ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သလို ဗဟိုကော်မီတီဖြစ်ပြီးသူတွေက ညီလာခံပြီးတာနဲ့ဖုတ်ဖက်ခါပြီးထွက်သွားကြလို့ statement ဟာ စနစ်တကျဖြစ်ခဲ့တဲ့ စတိတ်မင်းမဟုတ်ပါ၊ ဒါကိုဖြတ်သန်းဘူးတဲ့သူမှသိမှာပါ၊ ကိုဝင်းမိုးတို့ ကျနော်တို့တောင်မသိလိုက်ရဘူးဆိုရင် အံသြကြပါလိမ့်မယ်၊ ဒါကအရှိတရား၊ ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးပြီးချင်း မကျေနပ်မှုနဲ့စခဲ့ကြတာကိုတော့ လူတိုင်းမသိကြဘူး၊ စတိတ်မင်းတစ်စောင်ကိုကိုင်ပြီးပြောရင် အဲဒီစတိတ်မင်းကိုဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အားလုံး ပါဝင်ခွင့်မရခဲ့တာကိုလည်းမသိသေးတဲ့သူတွေသိစေချင်တယ်၊ အမှန်တကယ် နိုင်ဝင်ဘာ(၁) ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းတယ်၊ တပ်ဥိးကို မြန်မာနိုင်င့လုံးဆိုင်ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးလို့ခေါ်တွင်သည်ဆိုတာက မွေးဖွါးရာအစလို့လက်ခံရမဲ့သဘောရှိတယ်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီမှာပါတဲ့ ကိုမောင်မောင်သိန်းတောင် ဒီစတိတ်မင်းအကြောင်းသိပါရဲ့လားလို့ သူငယ်ချင်းတို့မေးကြည့်ပါဦး၊ ကျနော်မသိခဲ့ရဘူးဆိုတာကိုတော့ ကျနော်အတွက်ကျနော်ပြောနိုင်တယ်၊ ကိုအောင်နိုင်(ကိုသန်းလွင်ထွန်း)ကိုလည်းမေးကြည့်လို့ ရပါတယ်၊ကိုဝင်းမိုးကိုလည်းမေးကြည့်ပါ၊ ငြင်းချက်ထုတ်တာမဟုတ်ပါ၊ အစပိုင်းမှာ စနစ်မကျခဲ့ဘူး၊ ပရမ်းပတာနဲ့စခဲ့တာ၊ အဖွဲ့အစည်းမဆန်သေးတာကိုပြောပြတာပါ၊ နောက်ပိုင်း ညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့နေ့ကိုပဲ အများကလက်ခံပြီးကျင်းပခဲ့တာကိုတော့ ငြင်းလို့မရသလို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီကလည်း ညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျော်လွန်လို့မရဘူး၊ နောက်ဆုံးထပ်ပြောမယ် ဒီစတိတ်မင်းက စနစ်တကျပေါ်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပါခဲ့သူများကသိနေကြပါတယ်၊ တချို့ကသိနေပါလျှက်နဲ့မပြောပဲနေတာကိုတော့ ဘာမှမပြောလိုပါ။ တာဝန်ရှိစွာရှင်းပြရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
Ko Htay Tint-Dhr ကိုဦး ရေးတာ အမှန်ဘဲ ။ အစပိုင်းမှာ စနစ်မကျခဲ့ဘူး၊ ပရမ်းပတာနဲ့စခဲ့တာ၊ အဖွဲ့အစည်းမဆန်သေးတာကိုပြောပြတာပါ၊ ကျွန်တော် ဆိုရင် ဟွေစေတီ စခန်း စဖွဲ့ တော့ လူစုကိုယ်စားလှယ်နဲ့စခန်းကော်မီတီ စာရင်းစစ် လုပ်ရတယ် ( ဘိုပြေ-ဦးမြင်းသိန်းက သူ့ လူတွေကို ပြည်တွင်း ပြန်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတော့ ကျွန်တော်ကို အပြင်လူ အနေနဲ့ ထဲ့ပေးလိုက်တယ် ။ ရစ်ချက် ဆန်နီက လည်း ကယားကျောင်းသား အုပ်စုနဲ့ ကော်မီတီဖွဲ့ ထားတော့ ရန်ကုန်က ကျွန်တော့်ကို အဖြစ်သဘော လုပ်ငန်းစစ်တဲ့။ စားစရာမရှိ အိပ်ယာမရှိ တဲတောင် မရှိသေးတဲ့ အချိန် ဘာသွား စစ်ရမှာလဲ။ အလှုရှင်တွေ ပေးတဲ့ စားစရာနဲ့ ဆေးက မလုံလောက်တဲ့ အချိန်လေ ။ နောက်တော့ တော်လှန်ရေး နယ်မြေတွေက ကျောင်းသားတွေ စုမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကို ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး ပို့ လိုက်တယ် ။ မဲအောင်ဆောင်ကို စက်လှေနဲ့ တက်ပြီး ထိုင်းထောက်လှမ်းရေးနဲ့KNU နယ်မြေက မယ်နယ်ပလောကို ပို့ လိုက်တယ် ။ NDF တဲလေးမှာ ခိုင်စိုးနိုင်အောင် နိုင်ဟန်သာတို့ နဲ့အတူတူနေခဲ့ရတယ် ။ တပ်ပေါင်းစု ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့တည်ထောင်ပြီး လေ့ကျင့်ဖို့အတူတူ ဟန်ချက်ညီညီ တိုက်ကြဖို့တိုင်ပင်ကြတယ် ။ ပဒိုဝီး နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်က စစ်တောင်းမြစ်ဝမှာ ကျောင်းသားတပ်မဟာ ဖွင့်ပြီး ရပ်တည်ဖို့အကြံပြုကြတယ် ။ နောက်တော့ မယ်နယပလောကနေပြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင် သမီးမင်္ဂလာဆောင် သွားရင်း မဲဆောက်က ဗိုလ်မှုးစိုးစိုး အိမ်ပို့ ပေးတယ် ။ NDF က ချင်းကိုယ်စားလှယ်နဲ့၃ ရက်လောက် အတူ အိပ်ပြီး ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတယ် ။ ဗိုလ်မှုးရောဘတ်ဇန် လက်အောက်က တပ်ကြပ်တယောက်က ဆိုင်ကယ်နဲ့တပ်ရင်း ၂ ကို လိုက်ပို့ တော့ ဌေးနိုင်တို့ အဖွဲ့ နဲ့ ပြန်တွေ့ တယ် ။ ဗိုလ်မှုးရောဘတ်ဇန် ဖေါက်ခွဲရေး သင်တန်း C နဲ့D မှာ စစ်မြေပြင်ထောက်လှမ်းရေး ဘာသာ ဆွေးနွေးပြီး သင်ပေးခဲ့တယ် ။ နောက်တော့ ကျောင်းသားတွေ စည်းဝေးနေတဲ့ နေရာကို လိုက်ပို့ ပေးတယ် ။သစ်သားအိမ် အနိမ့်နဲ့ကျောင်းသားတွေ အများကြီးဘဲ ။ ရောက်သွားချိန်က အစည်းဝေးချိန်ဖြစ်နေတယ် ။ စကားနိုင်တွေ လုနေကြတာ ပါးစပ်က အမြုတ်ထွက်နေသလိုဘဲ ။ ကျွန်တော်က နေဝင်းစစ်တပ်ကို ကရင်နီဖက်က ကျောင်းသား သင်တန်းတက်နေပြီး တိုက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ။ တပ်ဖွဲ့ တွေ သင်တန်းပေး ဖွဲ့ စည်းဖို့ပြောပြခဲ့တယ် ။ ဒါနဲ့ ထွန်းဦးနဲ့ စခင်ပြီး စစ်ရေး သင်ရိုးညွန်းတွေ တိုင်ပင်ဖြစ်တယ် ။ တည်းခိုတဲ့ နေရာက မြေကြီးပေါ် သံမာန်သလင်းထားတဲ့ သစ်သားအိမ်ကြီးမှာ ဖြစ်တယ် ။ ညနေဖက်ဆိုရင် ထူးအိမ်သင်တို့ အုပ်စုနဲ့သောင်ရင်း မြစ်မစ်မှာ ရေချိုးကြရင်း ငါတို့ ဧရာဝတီ လိုဘဲ လို့ ပြောပြီး အိမ်လွမ်းကြသေးတယ် ။ ညဖက်မှာ ဦးအောင်စိန်က တံဆိပ်တွေ ရိုက်တာကို ဝိုင်းကူကြတယ် ။ထမင်းကျက်တာနဲ့ပြေးပြီး စားမှ ။ နောက်ကျရင် ဟင်းမရှိဖူး ။ ထမင်းမရှိတော့ဖူး ။ ငွေရှိသူတွေ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေဆီက ငွေရသူတွေ အလှုရှင်ရှိသူတွေက ဈေးတန်းမှာ လ္ဘက်ရည်သောက် ကော်ဖီသောက် နဲ့ ဇိမ်ကျပေါ့ ။ ကျွန်တော့်မှာ ဆေးလိပ်တောင် သောက်စရာ မရှိခဲ့ဖူး ။ ဟွေစေတီကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် စာရွတ်မရှိဘဲ ပထမ အကြိမ် ညီလာခံ သွားတက်တယ် ။ပြည်တွင်းဝင်ပြီး စစ်တိုက်ဖို့စဉ်းစားနေတုံးက နာမည်မထွက်အောင် နေခဲ့တယ် ။ နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာတော့ ပထမ အကြိမ် ဗဟိုကော်မီတီ အစည်းအဝေး ဖြစ်မြောက်ရေး တက်ရောက်တဲ့ လူစာရင်းရေးကြရင် ကျုပ်နာမည်ကို ဒီတခါ မမေ့ကြပါနဲ့။
SirgyiThakhinkodawmru Nan မပြောချင်တော့ပါဘူး။ လေ့လာကြပါ။ အောင်နိုင်(သန်းလွင်ထွန်း) က အားလုံးထက်စောပြီး တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့ဘို့ နယ်စပ်ရောက်လာတော့ သူက သူများတွေထက်ပိုသိနိုင်ပါတယ်။ လူတွေမရှိဘဲနဲ့(မောင်မောင်သိန်း) ပြောင်ကြီးကို ဗဟိုကော်မတီ စာရင်းထဲထဲ့သလိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့တာတွေ အဖွဲ့ထဲပါတဲ့သူတွေ အားလုံးမသိဘဲ ထုတ်ခဲ့တဲ့စတိတ်မင့်တွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သမိုင်းဆိုတာ ဘာလည်း ဆိုတာကို အရင် သိအောင်လုပ်ကြပါ။ ကိုယ်လုပ်တာမှ သမိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံး မှန်ကန်သောစိတ်ဓါတ်နဲ့ အမှန်တွေကိုသာ နှောင်းလူတွေသိအောင် ပြောကြစေလိုပါတယ်။ အားလုံးကို ချစ်ခင်စွာဖြင့်။
Min Thitsar Ko Htay Tint-Dhr တော်တော်စိတ်ပူရှာတယ် ...................................................................................................................................................... နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာတော့ ပထမ အကြိမ် ဗဟိုကော်မီတီ အစည်းအဝေး ဖြစ်မြောက်ရေး တက်ရောက်တဲ့ လူစာရင်းရေးကြရင် ကျုပ်နာမည်ကို ဒီတခါ မမေ့ကြပါနဲ့။
Ko Oo https://www.facebook.com/.../607374172658884
ABSDF ဖြတ်သန်းမှု.. ( ၂၅ ) နှစ်....။
၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘလ ပထမ အပါတ် သည် ABSDF ဖြတ်သန်းမှု ၂၅ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။...See More
Ko Oo ဒီမှာငြင်းနေကြသေးတယ်၊ ကျနော်လည်းပါတယ်.
Than Lwin Htun Ko Oo ပြောသလိုပေါ့ အောက်တိုဘာမှာကထဲက သေဘောဘိုးအပါအ၀င် ABSDF စခန်းတွေ ရှိနေခြဲ့ပီးသားပါ။ အဲနောက်မှာ ကျနော်၊ ကိုဝင်းမိုး၊ ကိုကျော်ထင်တို့ NDF ဥက္ကဌကြီးစောမောရယ်ကိုသွားတွေ့ခဲ့ကြပြီး တခုတည်းသောဗဟိုကော်မတီဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးညှိနှိုင်းခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီအချိန်အစောပိုင်းက ကရင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းထဲက တချို့က ကျနော်တို့ကို အိမ်ကြီးထဲမှာ အိမ်ငယ်ဆောက်ဘို့ကြိုစားသူတွေအဖြစ် အမြင်မကြည်ခဲ့ပါဘူး။ NDF ထဲက ဒေါက်တာတူးဂျာ၊ နိုင်ဟံသာ၊ ဖဒိုဝီး အပါအ၀င် ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ကူညီခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကို တနေရာထဲ (၀မ်းခါ) မှာ စုနိုင်အောင် လဲ ထိုင်းနယ်စပ်ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ အကူအညီအများကြီး ယူခဲ့ရပါတယ်။ KNU ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတချို့ရဲ့ နားလည်မှုလွဲမှားမှုဒဏ်ကို ကျနော်တို့တော်တော်ခံခဲ့ရပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ ညီလာခံအစပိုင်းမှာ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်း (ABSDF) နံမည်ကိုဖျက်ဘို့တောင် အကြိတ်အနယ်ပြောခဲ့ကြသူတွေရှိခဲ့တာမို့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းကို မျက်ရေလည်ရွှဲ စိတ်လှုပ်ရှားတကြီးပြောဆိုကာကွယ်ခဲ့ရတာတွေကိုလဲမမေ့နိုင်ပါ။ နောက်တော့ ဗဟိုကော်မတီကို ABSDF အမည်နဲ့ဘဲအတည်ပြုခဲ့ကြပြီး အစောက ကျောင်းသားနံမည် ကို ဖျက်ပြီး တော်လှန်ရေးအဖွဲ့သစ်အမည်ပေးဘို့ လုပ့်ခဲ့သူတွေလဲ မဲပေးစနစ်အရ ABSDF ရဲ့ပထမဆုံးဗဟိုကော်မတီမှာပါလာကြပါတယ်။ မရင့်ကျက်သေးချိန်မို့ စကထဲက အကွဲအပြဲဟာအတော်ဆိုးပါတယ်။ (AN)
Min Thitsar စပြိး တိုက်ပွဲခေါ်သလို ဖြစ်တော့မယ် ကိုထွန်းအောင်ကျော် နည်းလမ်းတမျိုးနဲ့၇ပ်ရင်လဲရလောက်ပါတယ်
Than Win ကိုကိုဦး မင်းစွပ်စွဲတဲ့ ငါတို့ KNU အားကိုယူပြီး လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်က လုံးဝ မမှန်ဘူး..ငါတို့နယ်စပ်ကို ရောက်လာကတည်းက မွန်နယ်မြေ သမိန်ဘရမ်းစခန်းမှာ ကိုမွန်းအောင်၊ဘစောထွန်း၊ကိုအေးမင်းတို့နဲ့ခဏနေခဲ့ကြပြီး.. နောက် ပိုင်း ဗိုလ်မှူး ဇော်ဘွန်(ုKIA)တာဝန်ခံဖြစ်သော NDF တပ်ပေါင်းစုရုံးစိုက်ရာ ဘုရားသုံးဆူ စခန်းမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်..နောက်မှ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ ၊ကိုအောင်ကြည်ဦးတို့အုပ်စု နောက်မှလာရောက်ပုးပေါင်းပြီးအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်၊ ၁၉၈၈ နိုဝင်္ဘာံလမှာKNU နယ်မြေ ၀မ်ခစခန်းမှာ ကျောင်းသားနှီးနှောဖလှယ်ပွဲရှိတယ် ကိုယ်စားလှယ်ရွေးရမယ်.. ဆိုတာဘဲသိတယ် ကိုယ်စားလှယ်ရွေးကြတဲ့အခါ မွန်နယ်မြေမှာရှိတဲ့တင်စိုးနောင်စခန်းကကိုယ်စားလှယ်ကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ကအစီအစဉ်နှင့် လိုက်ပို့ကြပြီး တပ်ပေါင်းစု ( NDF ) နယ်မြေမှကိုယ်စားလှယ်များ ငါတို့ကို KNU အစီအစဉ်နှင့် ပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်၊ ဒါအားလုံးကို NDF ရဲ့စီစဉ်မှုအောက်မှာသွားတာဖြစ်တယ်၊အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုယ်တို့ကိုလိုက်ပို့တဲ့ KNU အရာရှိတွေကိုတောင် ငါတို့ကတယောက်မှသိတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့က ပယောဂ ကင်းစွာဖြင့် ကျောင်းသားနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ် ၊ငါနှင့်အတူ ကိုမွန်းအောင်ပါတယ်၊ထူးအိမ်သင်ပါတယ် ၊KNU နယ်မြေကို ငါတို့ထက်အရင်ရောက်နေတဲ့ မင်းတို့ ၊၀င်းမိုး၊အောင်နိုင်တို့၊မောင်မောင်ကျော်၊မောင်မောင်သိန်း၊လှအောင် တို့နဲ့ KNU နှင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ပြဿနာတွေကို ငါတို့ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ ၊ဒါက မင်းတို့ချင်းဖြစ်ကြတဲ့ပြဿနာတွေလေ ငါတို့နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ ၊နောက်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်ရွေးတာ ၊မျှတတယ် ၊မမျှတဘူးဆိုတာ ငါနှင့်ဘာဆိုင်လဲ ဒါက NDF ကိစ္စဘဲလေ ၊မင်းသူတို့ကိုပြောပေါ့..ငါတို့က အဲဒီတုန်းက ဘယ် KNU ခေါင်းဆောင်တွေနှင့်မှရင်းနှီးသေးတာမဟုတ်ဘူး..၀မ်ခ ကိုရောက်မှ ကျောင်းသားတွေနှင့် KNU နှင့်ပြဿနာရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသိရတာ..ဒါကြောင့်မင်း ထင်တဲ့KNUကို အားကို ယူပြီး လုပ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်အခြေခံနဲ့ မင်းပြောတာလဲအဲဒီအချိန်တုံးက မင်းက ငါ့ထက်တောင် KNU ခေါင်းဆောင်တွေက်ိုပိုသိသေးတယ် ၊ကိုလှအောင်နှင့် KNUနှင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတာ ငါတို့နှင့်ဘာဆိုင်လဲ..ဒါသူတို့ကိစ္စဘဲ..ငါတို့က KNU နယ်မြေမှာဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုဘာမှမသိဘဲ ရိုးရိုးသားသား တက်လာခဲ့ကြတာပါ ..
Ko Oo သန်းဝင်းမင်းကိုငါပြောတာကေအင်ယူကိုအားယူပြီးလုပ်ခဲ့တာ ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်လာရတဲ့ကိစ္စပါ၊ မကဒတအစဟာ ဒီလိုအတိုက်အခံခပ်ပြင်းပြင်းစခဲ့တာကိုသိစေချင်လို့ဘဲ၊ အုပ်စုလေးတစ်စုအသွင်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှ အခုတင်ပြထားတဲ့ စတိတ်မင်းလို့တင်ထားတဲ့အထောက်အထားဟာလည်း ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိတာကိုထောက်ပြတာပဲ၊ နောက်ပေါင်းစည်းရေးညီလာခံကမှာ (၁)ရက်နေ့ကိုသတ်မှတ်တာကို မူအရလက်ခံပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ
Posted by lu bo at 3:41 AM